लकडाउन र सरकार « Janata Samachar
प्रकाशित मिति :3June, 2020 7:25 pm
कोरोनाले विश्वकै अर्थतन्त्रमा उथलपुथल बनाउने देखिन्छ । यस हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकरात्मक प्रभाव पर्ने त निश्चित छ । कोरोनापछिको विश्व कस्तो होला ? हाम्रो मानसिकतामा के के परिवर्तन आउंँछ होला ? लकडाउनले मात्र समस्याको समाधान हुने जस्तो देखिँदैन । तर यसप्रतिको सतर्कतामा लकडाउन पहिलो प्राथमिकतामा पर्न आउंँछ । यो कुराको महशुस पनि हुन थालिसक्यो । यो बाहेक अब धेरै चुनौती छन् जसको समाधान गर्न अब निकै समय लाग्नेछ । कोरोना पछिको विश्व अब परिवर्तित हुनेछ ।
कोरोनाले विश्वकै जनसंख्यामा नै बदलाब आइसक्यो । बालबालिका, युवादेखि वृद्धासम्म धेरैको ज्यान गयो । यी खबरबाट हामी बञ्चित रहेनौं। अब देशको जनशक्तिमा पनि ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । एउटा जीवन जानु भनेको नै ठूलो क्षति हो त्यसमाथि अहिलेको अवस्थामा त धेरै जनजीवन प्रभावित भएको छ । समय पहिलेको जस्तो सामान्य हुन त अब धेरै समय लाग्ने छ । लकडाउन खुल्नु पश्चात पनि समय उस्तै त रहने छैन । हामी सहजै रुपमा बाहिर निस्कन पाउने छैनौँ । कोरोनाको औषधि तथा भ्याक्सिनको शुरुवात भयो या आविष्कार नै भए पनि यसको नियन्त्रणमा समय लाग्नेछ । कोरोनाको न्यूनीकरणमा समय लाग्नेछ ।
यति कुरा त बुझिसक्यौ हामीले । र अबको विश्व पनि हामीले सोचेको भन्दा पृथक हुनेछ । काम कुरा यसरी थप्प हुन थाल्यो भने झन् ठूलो बेरोजगारी, भोकमरीको पैदा हुन सक्छ । र यी कुराहरु बाहेक पनि बेरोजगार युवाहरुको हालत के होला ? परीक्षा दिन भनेर बसेका विद्यार्थीहरुको मनस्थितिमा के असर पर्छ होला ? विद्यार्थीहरुको भविष्य के होला ? शैक्षिक क्षेत्रमा पनि नकरात्मक असर पर्ने देखिएको छ । अबको दुनियाँ भनेको नै टेक्नोलोजीको दुनियाँ हो ।
अब टेक्निकल फिल्ड, टेक्नोलोजीसंँग आवद्ध हुनुपर्ने एकदमै जरुरी देखिन्छ । अनलाइन कोर्स, अनलाइन क्लास, अनलाइन परीक्षा कसरी हुन्छ अब सरकार ? शिक्षण संस्थाले यतातिर महत्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । हुन त यी कुरा पनि अब सुचारु हुन थालेका छन् । तर अब कसरी हुन्छ यसलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न एकदम जरुरी छ । अब चुप लागेर मात्र बस्ने बेला पनि होइन । हामी भन्छौ नि डिजिटल वल्ड । हो अब डिजिटल वल्ड को साच्चै शुरुवात हो ।
अब टेक्नोलोजीपछि पर्नु भयो मने तपाई धेरै पछि पर्नु हुनेछ । हरेक एक सक्षम युवाबाट शुरुवात भयो भने धेरै प्रभावकारी हुनेछ । र यो पनि यथार्थ हो कि धेरैको पहुचमा इन्टरनेट छैन, सुविधा छैन र धेरै कुराको समाधान एकैचोटी हुँदैन तर जतिपनि पंँहुचमा हुनेले शुरुवात त गर्न सक्छौ नि हैन र ? आफूले जानेको बुझेका कुरा सिकाउने गराैँ । पहुँचमा हुनेले कसरी सकिन्छ ? आ आफ्नो स्थानबाट मद्दत गराैँ । आफूले जानेका बुझका या भनौ आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा अझै धेरै अध्ययन गरौंं । कोरोनाको प्रभावले आफ्नो सीप र ज्ञानमा भने प्रभाव पर्न नदिनु अत्यन्तै जरुरी छ । यस्ता कुराहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु अत्यावश्यक छ किनकि अब लकडाउन मात्र समस्याको समाधान होइन । अहिले अरु कुरा भन्दा पनि यतातिर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ ।
खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य नै अहिलेको प्राथमिकता हो । सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा धेरै प्रतिवद्धता गरिएका छन् तर पनि यी कार्यमा भने ध्यान गएको देखिदैन । अहिलेका मुख्य प्राथमिकता तथा अहिलेका मुख्य कार्यमा जोड दिनु र सरकारले छिटो भन्दा छिटो यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले ल्याएका नितिहरु पानामा मात्र सिमित नहोस् । किनकि अब छिटो काम भएन भने झन् ठूलो विपत्ति आउने देखिन्छ । लकडाउनको ७२ दिन कटिसक्दा पनि स्थिति भने जस्ताको तस्तै छ । सरकारका अब थप के के योजना छन् छिटोभन्दा छिटो ल्याइयोस् र लागू गरियोस् ।
अब काम कुरा नियम अनुसार परिचालन गरिएन भने एकातिर देशमा आर्थिक संकट र अर्कोतिर भोकमरी र महामारीले झन् ठूलो संकट आउने छ । काम सुचारु हुन त आवश्यक छ र अब कसरी सहज वातावरण पैदा गर्न सकिन्छ यी कुरामा पनि सरकारको ध्यान जाओस् र जनताले पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर सोच्नु काम गर्नु जरुरी छ । किनकी कोरोनाको त्राससंँग विश्वनै जुधिरहेको छ । लकडाउनको २ महिना बितिसक्यो । अब नेपालकै परिस्थिति हेर्दा दिन प्रतिदिन नयांँ संक्रमित थपिने क्रम जारी छ । संक्रमितको सङ्ख्या अझ बढ्ने छ । यो सबैलाई चेतना भइसक्यो ।
बाहिरबाट थुप्रै नेपाली आउंनेक्रम बढ्ने छ । भारतबाट पनि थुप्रै नेपाली आउनेक्रम बढिरहेको रहेको छ । सरकारले अहिलेको परिस्थतिलाई हेरेर काम गरिनै रहेको छ । सरकारलाई दोष मात्र हैन मिलेर साथ दिने बेला हो । सरकारले पनि अन्य कामलाई भन्दा अहिलेको परस्थितिलाई कसरी सकबर सहज बनाउन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिओस् । अब क्वारेनटाइनका व्यवस्था मिलाउनेदेखि, बाहिरबाट आएका नेपालीहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने काम कुराका साथै सरकारका हरेक नीति तथा नियमले पूर्णता पाओस् । र कोरोनापछि नेपाल समृद्ध होस् । नेपाली सुखी होउन् । लकडाउन पछिको नेपाल र नेपालीको विचारमा झन् सकारात्मकता छाओस् । सरकारको काममा जनमासको विश्वास छाओस् । सरकारको जितमा नै जनताको खुशी र जित छ । शुभकामना
(काबेरी बीएएलएलबीमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ )